Codsiga - Shanghai May Macluumaadka Macluumaadka Maqaarka Co, Ltd.
Saliida xad dhaafka ahi waxay ka dhalataa qanjidhada dhiiga ku dhaca ee maqaarka soo saara. Kuwa qaba xaaladdan waxay badanaa leeyihiin maqaar dhalaalaya iyo daloolo waaweyn.
Sawirada la qabtay ee UV Light iyo natiijada sawirada la ogaaday:
Laablaabku waa dillaacyo, laab laab, ama maqaarka maqaarkiisa. Iyada oo loo marayo shucaaca shucaaca ultraviolet, dabacsanaanta maqaarku waa sabool ama elastin iyo kolajka ayaa xumaaday, taas oo maqaarka ka dhigaysa mid qallalan una horseeda kororka duuduubka. (Hyaluronan wuxuu leeyahay dabeecad adag inuu biyaha soo dhuuqo waxayna kudhaceysaa ilaa dhowr jeer hadii biyaha la haayo. Dhanka kale, si kastaba ha noqotee, hadii biyaha la waayo, weynaantiisa ayaa hoos u dhacda marka la fiiriyo xididka laba jibaaran, root cube, ka dibna laalaabku waa loo abuuray si dabiici ah maqaarka).
Sawirada tijaabada ah ee la qabtay iyo natiijada sawirrada la ogaaday:
Cagaar waa laalaabkii la sameeyay ， Yellow waa laalaabkii isla markiiba sameysma
Maqaarku wuxuu umuuqan karaa mid mugdi ah marka midabka melanin si xad dhaaf ah loo soo saaro ama uu khafiif noqdo marka wax yar la soo saaro Tan waxaa loo yaqaan "midabeyn" waxaana sababa fallaaraha ultraviolet, infekshinka maqaarka ama nabarro.
Midabbada dusha maqaarka iyo hoostiisa.
Markii indhashareeryadan ay xiraan timaha, saliidda iyo dheecaanka, sebum ayaa gadaal gadaal u soo baxa, taasoo keenta inay dhibco muuqdaan.
Laga soo bilaabo gubashada qorraxda illaa falcelinta xasaasiyadda, waxaa jira xaalado badan oo maqaarkaaga uu isku casaan karo ama u xanaaqi karo. Waxay noqon kartaa maxaa yeelay dhiig dheeri ah ayaa ku soo qulqula maqaarka dushiisa si uu ula dagaallamo waxyaabaha kiciya una dhiirrigeliyo bogsashada. Guduudashada maqaarku sidoo kale waxay ku imaan kartaa jimicsi, sida ka dib fadhi jimicsi wadnaha garaacay ka dib.
Meelaha guduudan waa astaamo xasaasi ah
Daloolku waa daloolo yar yar oo ka muuqda lakabka maqaarka halkaasoo qanjidhada saliida leh ay soo saaraan saliida dabiiciga ee jirka. Baaxadda duleelka ayaa u ekaan kara mid ka sii weyn markii; 1) xaddiga sebum dusha sare ee maqaarka ka soo baxa qanjirrada saliida leh ee kuxiran follicle timaha waxay kordhayaan 2) sebum iyo nijaasta ayaa lagu aruurshay gudaha daloolka, ama 3) derbiga daloolku wuu kala jabayaa oo wuu fidaa iyadoo hoos u dhacda jilicsanaanta maqaarka awgeed
Midabka maqaarka bini'aadamka ayaa u kala duwan noocyo kala duwan oo bunni ah ilaa tan ugu fudud waxaa lagu muujin karaa midabka maqaarka iyo miisaanka Fitzpatrick. Maaddada muhiimka ah ee midabka maqaarku waa melanin midabka leh. Melanin waxaa lagu soo saaraa unugyo loo yaqaan 'melanocytes', oo ay weheliso maqaarka, waana midka ugu muhiimsan ee go'aamiya midabka maqaarka. Intaas waxaa sii dheer, maqaarka madow wuxuu u egyahay inuu yeesho unugyo melanin sameeya oo weynaada kuwaaso soosaara melanosomes badan, kaweyn, cufan, marka la barbar dhigo maqaarka fudud.
Warbixinta ayaa muujineysa natiijada sawirrada la helay: